Dacwada Fasalka ee Waxqabadka AOL wuxuu caawin doonaa Asturnaanta | Martech Zone
Dacwadda Class Class Lawsuit ee AOL waxay caawin doontaa asturnaanta
Talaado, September 26, 2006 Douglas Karr
Carlo iyo Farsamada wuxuu leeyahay maqaal ku saabsan sida dacwada ficil ee fasalka kaliya ay dhaawaceyso oo aysan caawin doonin warshadaha. Ma hubo in Carlo uu oggolaan doono haddii ay ahaan lahayd uu xog uu ku aaminay AOL oo laga sii daayay internetka. Wuxuu u maleynayaa in Google iyo Yahoo! waa kuwa ku xiga kanina waa arrin 'raadis' ah.
Ma ahan arrin 'raadis' gabi ahaanba, waa 'mas'uuliyad'. Waqtigan la joogo, dambiilayaashu waxay ku soo qulqulayaan internetka si ay u qabsadaan ugana faa'iideystaan ​​macluumaadka shakhsiyeed ee dadka si ay ugu qaataan aqoonsigooda ujeedooyin sharci darro ah. Shirkadaha waxaa lagu aaminay xogteena waana inay ilaaliyaan. AOL ma aysan ilaalin oo kaliya, waxay ka riixeen meelkasta oo qof ka heli karo!
Marka laga hadlayo qareennada hela lacagta oo dhan, kuma saabsana cidda helaysa. Waxay ku saabsan tahay cidda bixisa. Shirkaduhu ma laha shakhsiyaad, ma laha damiir, mas'uuliyadda kaliya ee ay leeyihiinna waa inay lacag ka helaan saamileyda. Sidaas darteed, ka oo keliya habka lagu ciqaabo shirkad oo looga dhigo inay jihada beddelaan ayaa ah in lagu dacweeyo xaddi lacageed oo xad dhaaf ah.
Waxaan aaminsanahay hanti-goosadnimada waxaanan gabi ahaanba ka soo horjeedaa dacwadaha aan micnaha lahayn. Xitaa waxaan aaminsanahay inay u baahan tahay sharciyo la soo saaro si guuldaradu u bixiso dhammaan kharashyada la xidhiidha dacwadda aan macquul ahayn. Laakiin tani maahan mid ka mid ah. Haddii AOL uu hoos ugu dhaco si adag taas awgeed, markaa shirkadaha kale way fiirsan doonaan oo waxay dhigi doonaan taxaddarrada lagama maarmaanka u ah meesha si loo ilaaliyo asturnaantayada.
Waxaan bixinaynaa adeegooda. Waxay ka macaashayaan xogteenna. Waxay u baahan yihiin in lala xisaabtamo.